Costa weli Ciil buu u qabaa Conte….(Arag wixii uu sameeyay kaddib markii xalay Chelsea laga reebay Champions League) – Gool FM
Costa weli Ciil buu u qabaa Conte….(Arag wixii uu sameeyay kaddib markii xalay Chelsea laga reebay Champions League)
Byare March 15, 2018
(London) 15 Maarso 2018. Diego Costa ayaa ka mid ahaa xiddigihii Antonio Conte u suuro galiyay inuu sanadkisii ugu horreeyay ee Chelsea uu ku guuleysto Premier League laakiin waji fiican kooxda ugama dirin.
Macallinka reer Talyaani ayaa Fariin u diray Costa isagoona u sheegay inaan kooxda looga baahneyn taa oo dood badan dhalisay iyadoona ugu dambeyn laga iibiyay naadigiisii hore ee Atletico Madrid oo uu iminka waqti fiican ku qaadanayo.
Laacibka asal ahaanta ka soo jeeda Brazil ayaa weli ciil u qaba Conte isagoona cadaawadiisa xalay soo muujiyay markii Chelsea laga reebay Champions League kaddib guul darro 3-0 ay kala kulantay Barcelona.
Costa ayaa boggiisa Instagram soo dhigay Sawir Safka Chelsea ee kulankii xalay, Keydka iyo Macallinka, wuxuuna sameeyay inuu tir tiray meeshii uu Tababare Conte ku qornaa isagoo muujinaya Xarashka uu u hayo macallinkisii hore kaddib sidii uu ula dhaqmay.
Kadib Chelsea, Messi oo doonaya in lagu soo aadiyo koox kale oo ingiriis ah (Waa tee?)
Messi oo Xalay si Xun u galay Saaxiibkiisii Yaraanta ee Fabregas...(DAAWO TUU KU DHIGAY!!)